आईसीयू र भेन्टिलेटरमा घट्न थाले बिरामी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
आईसीयू र भेन्टिलेटरमा घट्न थाले बिरामी
आश्विन ६, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण ओरालो लागेसँगै उपत्यकाका अस्पतालमा आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा बिरामीको चाप घट्न थालेको छ ।
यसअघि बिरामीको चाप बढेर अस्पताल परिसरमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अहिले आईसीयू र भेन्टिलेटरका बेड खाली भएका छन् ।
अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार करिब ४ हप्तायता कोभिडका बिरामीको संख्यामा आएको छ । उनले अहिले २९ जना बिरामी उपचाररत रहेकोमा १३ जना आईसीयूमा र ८ जनालाई भेन्टिलेटरको सपोर्टमा उपचाररत रहेको जानकारी दिए । ‘घट्दै गएको छ । खुसी कुरा हो । भिडभाड हुन नदिने र मास्क अनिवार्य गरे संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ,’ उनले भने ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आईसीयू पनि खाली भएका छन् । अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन रामविक्रम अधिकारी भन्छन्–‘१२ बेड हामीले कोभिड आईसीयू बनाएका थियौं त्यो खाली भएपछि हामीले जनरल बिरामी राख्न थालेका छौं ।’ त्यसैगरी भेन्टिलेटरमा ३ जना मात्र बिरामी उपचाररत छन् । अस्पतालमा कोभिडका ४५ जना बिरामी उपचाररत रहेको उनले जानकारी दिए ।
पाटन अस्पतालको एचडीयूमा ३३ जना र आईसीयूमा १० जनाले उपचार गराइरहेका छन् । यो अस्पतालमा ७३ शय्या एचडीयू र आईसीयू २८ शय्या छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मंगलबारको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशभर १०७ जना भेन्टिलेटरमा तथा ३३५ जना आईसीयूमा उपचार गराइरहेका छन् । देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २१ हजार ५२४ रहेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १३:३८
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा खड्कालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा टोली पठाउनुपर्ने भएपछि सत्ता गठबन्धनले मंगलबार बेलुकी परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार सुम्पिएकी थिइन् । उदयपुर क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित खड्का कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा परराष्ट्र विभागका प्रमुखसमेत हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा पठाउन प्रतिनिधि नभएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइएको हो  । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली महासभामा पठाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रीको टुंगो लागेको हो ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १३:३५
सुस्तामा जंगे पिलर कायम गरी नेपाल-भारत सीमा छुट्टयाउन माग
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ विद्रोह : अध्यक्ष नेपाल